‘Ronaldinho ayuu ahaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee aan ka garab ciyaaro waligay”- Henrik Larsson
4:40 pm - Tuesday January 23, 2018
Home » Latin America » ‘Ronaldinho ayuu ahaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee aan ka garab ciyaaro waligay”- Henrik Larsson
Apr 29, 2014 444 Viewed	Aidarous Comments Off on ‘Ronaldinho ayuu ahaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee aan ka garab ciyaaro waligay”- Henrik Larsson
Weeraryahankii hore ee naadiga Barcelona, Henrik Larsson ayaa ku tilmaamay Ronaldinho inuu ahaa laacibkii ugu cajiibsanaa ee uu waligii ka barbar ciyaaro.
Ciyaaryahanka hore ee qaranka Sweden oo ay shabakada Goal.com ku soo marti qaaday barnaamijkeeda “Mastercard Priceless Memories’ ayaa ka sheekeeyey saaxiibtinimadii ka dhaxaysay isaga iyo ciyaaryahanka reer Brazil, mudadii labada sanno ahayd ee uu kula sugnaa Camp Nou oo ahayd intii u dhaxaysay 2004 iyo 2006, waxaanu ku sifeeyey Ronaldinho mid ka mid ah mucjisooyinka soo maray kubada cagta.
“Laacibkii ugu khatarsanaa ee aan ka barbar ciyaaro waligay wuxuu ahaa Ronaldinho,” ayuu Larsson oo ka jawaabaya suaalaha taxanaha Video-ga ah ee “MasterCard’s Priceless Memories video series.”
“Markii aan ku biiray FC Barcelona wuxuu marayay heerkiisii ugu sareeyey, xaqiiqdiina wuxuu ahaa ciyaaryahan yaab leh, waxyaabaha uu ku samayn karo kubada, iyo hanaanka uu kubadaha u bixinayo ama u dhiibayo dhamaantood waxay ahaayeen waxaan la qiyaasi karin.
“Waxa sharaf ii ah inuu iigu yeedhi jiray inaan ahay qofka uu ciyaartiisa ka hello ‘his idol.”
Larsson ayaa loo tiriyaa guushii Barcelona ee Horyaalka Yurub sanadkii 2006, isagoo bedel ku soo gallay ciyaartii Finel ka, Kana caawiyey oo ay lugtiisa ka baxeen kubadihii ay dhaliyeen Eto’o iyo Belletti, guushiina ku raacday Blaugrana 2-1 ay koobka kaga qaaday Arsenal , wuxuu sheegay inay ahayd ciyaartii ugu fiicnayd intii uu kubada cagta ku soo dhex jiray.
Isagoo ciyaartaas ka hadlayana wuxuu yidhi: “Kumaan faraxsanayn in la igu bilaabi waayo ciyaarta, mana hubin inaan ciyaartaba ka qayb gallayo oo cagta saarayo garoonka, sababtuna ay ahayd, wakhti ka hadhsanaa, waxaad ogaydeen in Leonel Messi uu ahaa ciyaaryahanka booskaygii ka ciyaarayay.
“Aad buu u yaraa wakhtigaasi, [Frank] Rijkaard ayaa aniga iyo isaga na kala doortay, anigana kaydka i fadhiisiyey, Messina qaab ciyaareed fiican buu soo bandhigay, markii dambe anna waan gallay ciyaarta.
“Meel fiican ayaan fursad uga hellay inaan kubada uga dhiibo Eto’o hadana markale uga tuuro Belletti; goolkaas oo ahaa kii kali ahaa ee Belletti u dhaliyey Barcelona runtiina waxay ahayd wakhti fiican
“Maantadaa markaan dib u daawado, iyo mar kasta oo aan maqlo heesta astaanta u ah Eufa Champions Leauge, waxaan u qoslaa si weyn. Wakhtiyadda aan ku faano ayay kamid ahayd maalintaas aanu ku guulaysanay Champions League. Waa shayga ugu qaalisan ee lagu guulaysto marka laga reebo Koobka aduunka.”
Filed in Latin America Wararka Maanta
Arda Turan : Atletico waxa ka go’an Inay Finel ka CL u gudubto